Isethingi Enhle Ye-Manor Yomlando - I-Airbnb
Isethingi Enhle Ye-Manor Yomlando
Hlala kwenye yezindlu ezindala kunazo zonke e-UK. Ikamelo elihle elinophahla oluphakeme elinegumbi lokugezela elingaphakathi endlini endala kunazo zonke yase-Northamptonshire. Kusukela ngekhulu le-13 indlu ihlukile futhi ayivamile. Izindonga eziphakeme, amalambu nezindawo zomlilo ezinkulu zijwayelekile.
Inani lihlanganisa isidlo sasekuseni se-toast, i-cereal, itiye noma ikhofi kanye nejusi yezithelo ezintsha.
I-Prebendal Manor iyisakhiwo esineminyaka engu-800 esaqala ku-1230 esinokuxhumana okuningi komlando. Ekuqaleni ibingumnikazi we-Lincoln Cathedral kulezi zinsuku iyikhaya lomndeni elinezici eziningi ezithakazelisayo. Sinezindonga ezifanele, ihholo eliphakathi nendawo, amafasitela esonto nezindawo ezinkulu zomlilo.
4.94 · 262 okushiwo abanye
I-Nassington yidolobhana elibukekayo elinesitolo sasemzaneni, isinambuzane kanye ne-pub ehlinzeka ngokudla. Kunezindawo eziningi zomlando ongazivakashela endaweni ezungezile njengedolobha lase-Georgia lase-Stamford nase-Fotheringay, lapho uMary Queen of Scots wayeboshwe khona lapho kwazalelwa khona uRichard III. Kukhona nenani elihle lokuhambahamba okuhlaba umxhwele njenge-Nene Way.
Kunama-pub amaningi emizaneni ezungezile, futhi siyakujabulela ukusiza uma udinga iziphakamiso mayelana nokuthi ungadla kuphi.
Indlu isebenza kakhulu njengekhaya lomndeni futhi siyakujabulela kakhulu ukwabelana ngenkomishi yetiye, ingilazi yewayini noma ubhiya. Ngokulinganayo uma uthanda singakushiyela kumadivayisi akho.